Corn | Myanmar Seed Information Portal
Home » Protocol » Corn
Format for Seed Registration Protocol
1. Crop name - Corn
2. Season/region/time - rainy season/one time/lowland region၊ upland region
3. Check variety - Popular varieties
4. Plot size - 16.5' x 15'
5. Spacing - 9' x 2.5"
6. Design - Randomized Complete Block Design(RCB)
7. Fertilizer rate -
(a) Time of land preparation - half of Urea (56 lb), one bag of T-super (112 lb) half of Potash (56 lb)/ac
(b) 20-21 days - half of Urea (56 lb), Potash (28 lb)/ac
(c) 35-40 days - half of Urea (112 lb), Potash (28 lb)/ac
(a) Deep plough and harrowing.
(b) Spacing (30 in x9in) and 23000-25000 plts/ac
(c) 2-2.5 in deep and cover with the soil to get the uniform seedling.
(d) Shall apply Organic fertilizer-
• Shall apply uniformity one bag of Urea, T-super and half of Potash per acre in land preparation. (Basal fertilizer)
• 20-21 days – half of Urea (56 lb), Potash (28 lb)/ac
• 35-40 days- half of Urea (112 lb), Potash (28 lb)/ac
(င) အပင်ပေါက်စုံပြီးနောက် (၁၄) ရက်သားအတွင်းတစ်ကျင်းလျှင် တစ်ပင်ချန်၍ အပင်ခွဲပါ။
(စ) စိုက်ကွက်အတွင်း ရေမဝပ်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါ။ အထူး သဖြင့် စိုက်ပျိုး ပြီးသည် မှ တစ်လအတွင်း ရေမဝပ်စေရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
(ဆ) အပင်ပေါက်စုံပြီးနောက် ၃၅-၄၀ရက်သား ဘောင်တင်ပြီးသည်အထိပေါင်းမြက်များကင်းစင် အောင်ပြုလုပ်ပါ။
(ဇ) ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်၊ နို့ရည်တည်ချိန်တို့တွင် အစိုဓါတ်လုံလောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် စိုက်ခင်းအတွင်း ရေမဝပ်စေဘဲရေသွင်းပေးရမည်။
9. Standard and data record
(a) Data record
1. 100 % germination
2. Number of plants at3weeks after sowing
3. 50% Tasseling
4. 50% Silking
5. Plant Height, cm
6. Ear Height, cm
8. Condition of diseases
9. Condition of pests
10. Husk Cover(Score/ Grade)
11. Harvested Plant
12. Harvested Ear
13. Ear Rot
14. Field Weight (Kg)
15. Moisture Percentage
16. Ear wt (Kg)
18. Ear Length (cm)
19. Row Length (cm)
20. Ear diameter (cm)
21. No. of Rows, no
22. Kernels per Row, no
23. Seed Type
24. Seed Colour
25. 1000 Seed Wt.
26. Yield (tin/ac)
27. adaptable region
28. Distinct Characteristics
29. Non GMO
( b) Record of standard
(RCB/Simple Trial) (RCB) (if RCB degree of freedom: df – 12)
Eg: degree of freedom: df = (r-1) (t-1) = (3-1) (7-1) = 12
t = treatment or variety
Spacing – 2.5’ x 9”
Row length – 16.5 (6 rows) (23 hole)
Release varieties (eg. CP 888 and Yezin hybrid 10)
Complete germination (day)
Day of 75 % germination
Number of plants after sowing in3weeks
Calculate the number of plants from2rows in small plot after sowing in3weeks.
Record of central flowering date from 50% tassel of plants in2rows.
Record of 50% silking date in2rows.
Measure the plant height from the base of the plants to node of tesseling on5plants randomly selected
အပင်အမြင့်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း အပင်အမြင့်တိုင်းသော ကျဘမ်း ၅ ပင်မှ တိုင်းယူရန်ဖြစ်သည်။ ပင်စည်အောက်ခြေရင်းမှ အဖူးထွက်သောအဆစ်အထိတိုင်းရပါသည်။ တစ်ပင်နှစ်ဖူးဖူးသောအပင်များကို အပေါ်ဖူးထွက်သောအဆစ်အထိတိုင်းရပါမည်။
စမ်းသပ်ကွက် မရိတ်သိမ်းမှီတစ်ပါတ်ခန့်အလိုတွင် မျိုးအလိုက် အတွင်းတန်း ၂တန်းရှိ အပင်များမှ ကောက်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမြစ်မှနေ၍ ၃၀ ဒီဂရီနှင့်အထက် ယိုင်လဲနေသောအပင်များကိုရေတွက်၍ မှတ်သားရန်ဖြစ်ပါသည်။
Data of disease shall be recorded from taselling to not drying.
To mention the kind of disease.
ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုးမွှားကျရောက်မှုမှာမျိုးကိုလိုက်၍ တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးကွာခြားမှုနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျရောက်မှုသိသာထင်ရှားစွာရှိကကျရောက်သည့် ပိုးမွှားအမျိုးအစားသာဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးအလိုက် ပိုးမွှားကျရောက်မှုအဆင့်အတန်းကို -
အဆင့်(၅) ပိုးမွှားကျရောက်မှုအလွန်များပြားဟုဖော်ပြရန် ဖြစ် ပါသည်။
Husk Cover (Score/ Grade)
စမ်းသပ်ကွက် မရိတ်သိမ်းမှီ ၁-၃ ပါတ်အလိုတွင် အောက်ပါအတိုင်းကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၁) ဖက်စရှည်၍ ဖက်သားကျစ်ပြီးအဖူးထိပ်ဖျားထိကျစ် လစ်စွာလုံခြုံမှုရှိခြင်း
အဆင့် (၂) ဖက်စရှည်၍ ဖက်သားအသင့်အတင့်ကျစ်ပြီးအဖူးထိပ်ဖျားထိကျစ်လစ်စွာလုံခြုံမှုရှိခြင်း
အဆင့် (၃) ဖက်သားဖွ၍ အဖူးထိပ်ဖျားထိဖက်လုံခြင်း
အဆင့် (၄) ဖက်သားဖွပြီးအဖူးထိပ်ဖျားပေါ်နေခြင်း
အဆင့်(၅) ဖက်စတို၍ ဖက်သားဖွပြီးအဖူးထိပ်ရှိအစေ့များပေါ်နေခြင်း
စမ်းသပ်ကွက်ရိတ်သိမ်းစဉ်တွင် ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းတန်း ၂ တန်းရှိအပင်အားလုံးအဖူးကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မကပ်သည် ဖြစ်စေရေတွက်ရပါမည်။
ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါကတစ်ဧက၏ ၁၀၀ ပုံတစ်ပုံအတွင်းရှိအပင်အားလုံးအဖူးကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မကပ်သည် ဖြစ်စေရေတွက်ရပါမည်။
Remark ။ 1/100 per acre. Row Spacing 2.5 ft and row length 174 ft
Harvested area = 2.5 ft x 174 ft = 435 sq.ft
အတွင်းတန်း ၂တန်းမှ ရိတ်သိမ်း၍ ရရှိသောအဖူးများကိုရေတွက် ရပါမည်။ တစ်ပင် ၂ ဖူးဖူးသောအပင်များမှ သေးငယ်သိမ်ဖျင်းသောအဖူးအညှပ်များကိုအဖူးရေတွက်ရာတွင်ထည့်သွင်း၍ရေတွက်ရန် မလိုပါ။
ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါကတစ်ဧက၏ ၁၀၀ ပုံတစ်ပုံအတွင်းရှိအပင်များမှ အဖူးများကိုရေတွက်ရပါမည်။ တစ်ပင် ၂ ဖူးဖူးသောအပင်များမှ သေးငယ်သိမ်ဖျင်းသောအဖူးအညှပ် များကိုအဖူး
ရေတွက်ရာတွင် ထည့်သွင်း၍ ရေတွက်ရန် မလိုပါ။
စမ်းသပ်ကွက်ငယ်တစ်ကွက်စီမှ ပြောင်းဖူးများအားဖက်ခွာပြီးနောက် အပင်လဲပြိုမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှားရောဂါကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ အဖူးများအရည်အသွေးပြောင်းလဲပျက်စီးဆွေးမြေ့နေသည်များကိုကြည့်ပြီးအဆင့်အတန်းခွဲခြားသတ်မှတ် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။
အဆင့် (၁) အပျက်အစီးလုံးဝမရှိပါ။
အဆင့် (၂) အဖူးရှိ ၁၀% သောအစေ့များ (အရောင်ပျယ်)
Field Weight (Kg)
စမ်းသပ်ကွက်ရိတ်သိမ်းရာတွင် စမ်းသပ်ကွက်တစ်ခုတွင် စိုက်တန်း ၂တန်းစလုံး ကိုရိတ်သိမ်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးအတွင်းတန်း ၂ တန်းမှ ပြောင်းဖူးများကိုဖက်ခွာပြီးချိန်တွယ်ရပါမည်။ မှတ်တမ်းယူရာတွင် ကီလိုဂရမ်ယူနစ်ဖြင့် ဒဿမ ၂ နေရာအထိယူရပါမည်။
ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါကတစ်ဧက၏ ၁၀၀ ပုံတစ်ပုံအတွင်းရှိရိတ်သိမ်းပြီးပြောင်းဖူးများကိုဖက်ခွါပြီးချိန်တွယ်ရပါမည်။ မှတ်တမ်းယူရာတွင် ကီလိုဂရမ်ယူနစ်ဖြင့် ဒဿမ ၂ နေရာအထိယူရပါမည်။
စမ်းသပ်ကွက်တစ်ကွက်စီမှ ပြောင်းဖူး ၅ ဖူးကိုကျဘမ်းကောက်ယူ၍ တစ်ဖူးစီမှ အစေ့အနည်းငယ်စီကိုအဖူးအလယ်ရှိကန့်လန့်ဖြတ်အလယ် ၂တန်းမှ ချွေယူကာအစေ့များပေါင်းပြီးအစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာပါမည်။ ရိတ်သိမ်းကာစပြောင်းဖူးမျိုးများတွင် အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်း ၂၅-၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတတ်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုင်းကိရိယာမရှိပါကနမူနာပြောင်းဖူး (သို့မဟုတ်) ပြောင်းစေ့များကိုနိုင်လွန်ပိုက်အိတ်တွင် ထည့် ၍ နေပြင်းပြင်းတွင် ၃-၅ ရက် လှန်းပြီးသွားနှင့်ကိုက်ကြည့်ပါကထောက်ကနဲမြည်သည့် ၁၃-၁၅ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် ရှိသည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်။
စမ်းသပ်ကွက်ငယ်မှ ရိတ်သိမ်း၍ ရရှိသောအဖူးများမှ ကိုယ်စားပြု ၅ ဖူးအားအချိုးကျ (ကောင်း၊ သင့်၊ ညံ့) ရွေး၍ အလေးချိန် ချိန်တွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသောယူနစ်မှာကီလိုဂရမ် ဖြစ်သည်။
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီတိုင်းယူရန် ဖြစ်ပါသည်။ အဖူးထိပ်မှ အူတိုင်အဆုံးထိတိုင်းယူရန် ဖြစ်သည်။
Row Length (cm)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီတိုင်းယူပြီးပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ အဖူးထိပ်မှ အစေ့တန်းဆုံးသည့်ထိရှိသောအရှည်ကိုတိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီတိုင်းယူပြီးပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းဖူးတစ်ဖူးချင်း၏ အလယ်တွင် တိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။
No. of Rows (no)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီရှိအစေ့အတန်းအရေအတွက်ကိုရေတွက် မှတ်သားပြီးပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
Kernels per Row (no)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီတွင် ရှိသောအစေ့များအားရေတွက် မှတ်သားပြီးပျမ်းမျှတန်ဖိုးဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသောအဖူး (၅) ဖူးအားနေပူလှန်း၍ အခြောက်ခံပြီးမှ ချိန်တွယ် ရန် ဖြစ်သည်။
Seed Yield %=-------------------------------------- x 100
(Cob + Seed) Weight
Remark ။ (Cob + Seed) အလေးချိန်နှင့် အစေ့အလေးချိန်တို့အားတိုင်းတာသည့်အခါ တစ်ဆက်စပ်တည်းချိန်တွယ်မှတ် သားပြီးတိုင်းယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
Flint and Dent.
Yellow, Orange and White.
အစေ့များအားအခြောက်ခံပြီးမှ အစိုဓါတ်တိုင်းကိရိယာဖြင့် အစိုဓါတ်တိုင်းပြီးအစေ့ ၁၀၀၀ ရေတွက်၍ ချိန်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ (အစိုဓါတ်တိုင်းကိရိယာမရှိခဲ့ပါကပြောင်းဖူးစေ့အားသွားဖြင့် ကိုက်ကြည့်၍ ထောက်ကနဲမြည်သည့်အချိန်တွင် တိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။) အသုံးပြုသောယူနစ်မှာဂရမ်ဖြစ်သည်။
Yield Ft.wt x (100-M.C) x Shelling x Harvested Area
Remark ။ Ear weight and moisture content will measured be continuously.